दिपेन्द्र भए जयकाली ! - MeroReport
Posted by Sanju Paudel on May 31, 2017 at 1:30pm
जोश, जागँर अनि दृढ संकल्प लिएर उद्यमशीलता गरेमा स्वदेशमै राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने भनाईलाई आत्मसात् गर्दै अगाडी बढ्नु भएका सर्लाही, राजघाट ८, विहानी चौकका युवा दिपेन्द्र मैनाली उद्यमशीलताको क्षेत्रमा स्थानीय तथा आसपासको समुदायका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ । सर्लाही, राजघाट ८, विहानी चौकका दिपेन्द्रले विगत तीन वर्ष देखि ब्यवसायीक रुपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आइरनुभएको छ । जयकाली कृषि फर्माको नामबाट ब्यवसाय गर्दै आइरहनु भएका दिपेन्द्रलाई आफ्नो नामले भन्दा पनि जय कालीका नामले चिनिनु हुन्छ । बि.एड. पास गरिका दिपेन्द्रले त्यसरी ब्यवसाय शुरु गर्दा गाउँलेहरुले पढेको मान्छे जागिर छोडेर तरकारी खेती गर्‍यो भनेर उनलाई बहुलायो सम्म भन्ने गर्दथे । तर गाँउलेहरुको कुरा नसुनी आफ्नै जोश, जागँर अनि दृढ संकल्प लिएर ब्यवसायलाई निरन्तरता दिईरहनुभयो ।
मह एग्रीकल्चर(कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिबंश आचार्य) मा २ वर्ष काम गरेको अनुभवले नै दपेन्द्रलाई एक सफल उद्यमीका रुपामा चिनाउन मद्धत गरेको हो । उत्पादन भएको तरकारीहरु विशेष गरी घरबाट नै बिक्री हुने गरको तथा कहिले काही विरगञ्ज तथा हेटौंडा सम्म पनि पुग्ने गरेको उँहाले जानकारी दिनुभयो । तरकारी ब्यवसायको साथमा फलफूल खेती पनि शुरु गर्नु भएको दिपेन्द्र आफूसँगै सिँगो गाँउलाई नै उद्यमशील बनाउन चाहनुहुन्छ । त्यसैले पनि उँहा त्यस क्षेत्रको माटो, हावापानी आदीको आधारमा आफैले पहिले विरुवा लगाउने र राम्रो भयो भने गाउलेहरुलाई पनि सोही विरुवा लगाउनका लागि प्रोत्साहन तथा सल्लाह दिनु हुन्छ । उँहाकै अनुसरण गर्दै राजघाट तथा आसपासका धेरै युवाहरुले तरकारी खेती शुरु गरिसकेका छन् । उँहाले गरेको तरकारी तथा फलफूल खेतीको बारेमा जानकारी लिन तथा फर्माको अवलोकन तथा भ्रमणका दैनिक दश जना देखी दुई सय जना सम्म अगन्तुकहरु आउने गर्छन् । आधुनिक तरिकाले ब्यवसायीक रुपमा सो खेतीमा दिपेन्द्र दैनिक १८ घण्टा सम्म खटिएको बताउनुहुन्छ ।
मिलनसार तथा सहयोगी स्वभावका २५ वर्षिय दिपेन्द्रले तीन ओटा टनेल सहित एक कट्ठा जमिनमा शुरु गरएको सो ब्यवसाय अहिले सात ओटा टनेल सहित करिब तीन बिगाह जमिनमा फैलिएको छ । दिपेन्द्रका अनुसार तराईमा टनेलद्धारा गरिने खेती उँहाले पहिलो पटक शुरु गर्नुभएको हो । समय–समयमा किसानहरुलाई कृषि सम्बन्धी जानकारी दिदै आईरनु भएको छ । नेपालका विभिन्नि जिल्ला, आसपास तथा स्थानीय किसानहरुलाई ब्यवसायीक तरकारी खेती तथा फलफूल खेतीको बारेमा तालिम पनि दिने गर्नु भएको छ ।
दिपेन्द्रलाई पहिले त्यसरी ब्यवसायीक रुपमा तरकारी तथा फलफूल खेती शुरु गर्दा यत्रो पढेको मान्छेले यसरी ब्यवसाय गरको भनेर बहुलायो भन्ने, कुरा काट्ने तथा हतोत्साहित गाउँलेहरु तथा छर –छिमेकीहरु अहिले ब्यवसायीक रुपमा तरकारी तथा फलफूल खेती सम्बन्धी जानकारी लिन आएको देख्दा उँहा खुशी हुदैं आफूँले जानको कुरा सिकाउनु हुन्छ । उँहाको काम देखेर सैयौंले ब्यवसायीक रुपमा तरकारी तथा फलफूल खेती शुरु गरिसकेका छन् । यसरी आफ्नो कामलाई अरुले पनि माया तथा अनुशरण गरको देख्दा दिपेन्द्रलाई निकै नै खुशी लागेको बताउनुहुन्छ । उँहाले आफ्नो ब्यवसाय मार्फत मासिक तीस हजार बचत गर्दै आइरहनु भएको छ ।
आर्थिक सवलिकरणका लागि उद्यमशीलता नै जरुरी रहेको भन्दै दिपेन्द्र आफ्नो विचार यसरी राख्नुहुन्छ, “ मलाई सानै देखी कृषिमा रहर थियो । यसैक्रममा मैले मह एग्रीकल्चरमा काम गरेर थप अनुभव बटुल्न पाए । त्यही सिकेकोे ज्ञान, शीपलाई सदुपयोग गरेर मैले यसरी
ब्यवसाय गरिरहेको छु । मेरो काम देखेर घर परिवार, छिमेकीहरु तथा अन्य गाउँलेहरुको साथमा कृषि विकास कार्यलय, सर्लाहीका कर्मचारीहरु पनि सबै जना खुशी हुनुहुन्छ । म आफ्नो काम प्रति सन्तुष्ट छु । ”
ईमान्दार , लगनशिल तथा मेहनती दिपेन्द्र आफूले सञ्चालन गर्दै गरेको यस ब्यसायलाई भविस्यमा पनि निरन्तरता दिने तथा ब्यवसायलाई अझै ब्यवस्थित बनाउदै एकातिर आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाउने तथा अर्कोतिर कृषिको महत्व र आवश्यकताको बारेमा प्रचार–प्रसारमा थप पहल गरेर अभियानको रुपमा लैजान चाहनु हुन्छ जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाहरुले स्वदेशमै कृषि सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्ररणा होस् । आफूसँगै सिँगो राष्ट्रलाई नै उद्यमशील बनाउने लक्ष्य राख्नु भएको दिपेन्द्रको लक्ष्य चाडैं पुरा भएको देख्न पाईयोस् । उँहाको यस अभियानलाई हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रुपममा सहयोग छ साथै अभियानको सफलताको लागि धेरै धेरै शुभकामना पनि छ । प्रयास गरे आखिरमा गरे असम्भव त छैन नी, हैन र ?